Qarax labaad ayaa laga soo sheegay garoonka diyaaradaha ee Kabul kadib markii 13 qof ay ku dhinteen qaraxii koowaad
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Crime » Qarax labaad ayaa laga soo sheegay garoonka diyaaradaha ee Kabul kadib markii 13 qof ay ku dhinteen qaraxii koowaad
Wararka Afgaanistaan • Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Crime • Wararka Dowladda • News • Ammaanka • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka kala duwan
Warbixinnada sirdoonka ayaa soo baxay horaantii toddobaadkan iyagoo ka digaya weerarro argaggixiso oo “ku dhow” garoonka diyaaradaha Kabul oo ay geystaan ​​kooxda ISIS-K-oo xiriir la leh Dawladda Islaamiga ah ee Afghanistan.
Qaraxyo ayaa gilgilay Madaarka Caalamiga ah ee Hamid Karzai ee Kabul.
Qaraxyada ayaa u muuqda weeraro is qarxin ah.
Sida laga soo xigtay Taliban, 13 qof ayaa ku dhintay qaraxa koowaad.
Laba qarax oo ka dhacay meel u dhow garoonka diyaaradaha ee Kabul maanta ayaa sababay “tiro dad ah oo Mareykan ah & dad rayid ah”, sida ay sheegtay Pentagon -ka.
Qarax goor hore oo maanta ah agagaarka Albey Gate ee Kabul Hamid Karzai Airpo Internationalrt, ayaa waxaa xaqiijiyay Waaxda Difaaca Mareykanka Xoghayaha Saxaafadda John Kirby, oo sheegay in qaraxa uu ka dhashay “Khasaare aan la ogeyn tiradooda”.
Sida uu sheegay afhayeenka Taliban, weerarka ismiidaaminta ah ee muuqda ayaa dilay ugu yaraan 13, oo ay ku jiraan carruur iyo ilaaladii Taliban.
Qarax labaad ayaa lagu soo warramayaa in uu ka dhacay agagaarka Hotel Baron oo ku dhow garoonka diyaaradaha ee Kabul ka dib markii uu dhacay qarax weyn iyadoo ay weli soconayaan daadgureynta ciidammada.
Wax yar ka hor qaraxa labaad, Danjiraha Faransiiska ee Afgaanistaan ​​wuxuu uga digay dadka rayidka ah inay “ku gabbadaan” irdaha laga galo garoonka diyaaradaha ee Kabul, isagoo sheegay in laga yaabo in qaraxii labaad uu dhow yahay ka dib markii la xaqiijiyey wararka sheegaya inuu dhacay qarax weyn iyadoo daadgureynta militarigu ay socoto.
Danjire David Martinon ayaa bartiisa Twitter -ka ku soo qoray digniin “deg -deg ah” oo ku socota “dhammaan saaxiibadeena reer Afgaanistaan” Khamiista, isagoo ka digay in “qarax labaad uu suuragal yahay”. Saraakiisha Mareykanka ayaa sheegay in qaraxa koowaad ay u badan tahay in uu ka dambeeyay qof ismiidaamiyay meel ka baxsan garoonka diyaaradaha.
Goobta gegida dayaaradaha caalamiga ah ee Hamid Karzai ayaa durba qasan ka hor qaraxa, iyadoo kumanaan reer Afgaanistaan ​​ah, Mareykan ah iyo kuwo kale ay raadinayeen marin ammaan ah oo ay dalka uga baxaan ka hor inta aan la gaarin 31 -ka Ogosto.